लक्ष्मीका उपासकहरूको लक्ष्मीपूजा - Naya Patrika
लक्ष्मीका उपासकहरूको लक्ष्मीपूजा
नवीन अर्याल/नवीन प्यासी
आज लक्ष्मीपूजा । यस दिन सबै मानिस आफूले कमाएको धनदौलतको पूजाआजा गर्छन् । अझै थपियोस् भन्ने कामना गर्छन् । हिन्दू परम्परामा औँसीको रातमा चामलको पिठोमा अबिर र विभिन्न रङ मिसाएर बनाएको मण्डल (रंगोली)मा लक्ष्मी र यक्षको विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने चलन छ । यी दुई देव–देवी धन र यशका देवता भएको हिन्दू धर्मावलम्बीमा विश्वास छ ।
उद्योगी–व्यवसायी वर्गले यो पर्वलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गर्छन् । हुन त आममानिसले पनि यो पर्व धुमधामसाथ मान्छन् । सबैले आफ्नो गच्छेअनुसार मनाउँछन् । धनको पूजा गर्छन् । तर, धनले सन्तुष्टि दिन्छ त ? इच्छाशक्ति नै त्यही भएपछि दिँदो रहेछ । धनले जीवन निर्वाहका साथै मानिसको सन्तुष्टिका लागि भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा उद्योगी–व्यवसायीबाट बुझ्न सकिन्छ । जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक पैसा पुगिसकेपछि पनि अझै फैलिन चाहन्छन् उनीहरू । आखिर किन त ?
मानिसको परिचयका आयाम फरक–फरक हुन्छन् । कोही गीत संगीतमा, कोही पेन्टिङ या राजनीतिमा या अन्य कुनै क्षेत्रमा होला । अहिले पैसाविनाको संसारको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तर, भनिन्छ, एउटा बिन्दुमा पुगेपछि पैसा अंक मात्र हो । उद्योगी–व्यवसायीका लागि पैसा के हो ? खासमा उनीहरूले पैसामा सुख, सन्तुष्टि, खुसी कसरी भेटाउँछन् त ? लक्ष्मीपूजाको सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाका नवीन अर्याल र नवीन प्यासीले चर्चित धनाढ्यहरूसँग यही जिज्ञासा राखेका छन् । उनीहरूको धारणा उनीहरूकै शब्दमा :
० डा. उपेन्द्र महतो
संस्थापक अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ
म जन्मघरमा दीपावली मनाउँछु । घरको सरसफाइ र सजावट गरेर आकर्षक बनाउँछौँ । दिनभरि भोकै बसेर साँझ लक्ष्मीपूजा गर्छौं । १४ देशमा मेरो बिजनेस छ । हाम्रो सर्लाहीको घरसँगै १४ देशमा रहेका बिजनेस युनिटमा लक्ष्मीपूजा हुन्छ ।
दीपावली लक्ष्मीको आराधना गर्ने पर्व हो । दीपावली धनसँगै जोडिन्छ । लक्ष्मीको आराधना गर्नु आत्मविश्वास बढाउनु हो । साथै, आत्मशुद्धि पनि हो । आत्मविश्वास बढेपछि जुन काम आँटिन्छ, त्यसमा सफलता पाउन सहज हुन्छ । आत्मशुद्धिले गलत ढंगबाट पैसा कमाउने आँट आउँदैन ।
धन कमाएपछि मानिसको सन्तुष्टि स्वतः बढिहाल्छ । समाजमा प्रशस्त धन कमाउने धेरै हुन्छन् । तर, लक्ष्मीको आराधना गरेर धन कमाउनेले केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा पनि खर्च गर्छन् । किनकि, उसमा अहमता हुँदैन । लक्ष्मीको आराधनाले मनमा पवित्रता ल्याउँछ । सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दा झन् सन्तुष्टि अनुभूति हुन्छ ।
त्यसैले धन आत्मसन्तुष्टि पनि हो र आत्मसम्मान पनि । लक्ष्मीको आराधनाले प्राप्त हुने धनले आत्मसन्तुष्टि, आत्मसम्मान र सामाजिक कार्य गर्ने इच्छा पलाउँछ । सबै सफलता चुम्न चाहन्छन् । फुटबलमा रफ खेलेर पनि गोल हान्न सकिन्छ । तर उसलाई गिल्टी फिल हुन्छ कि मैले रफ खेलेर गोल हानेँ भन्ने । व्यवसायमा पनि सही तरिकाले पैसा कमाउँदा सन्तुष्टि मिल्छ ।
पैसा जीवनमा धेरै ठूलो कुरा हो । तर, सबैथोक होइन । पैसा कमाउने मात्र होइन, सदुपयोगमा पनि विचार पु-याउनुपर्छ । व्यवासायीले पैसा कमाउँदा उपभोक्ताप्रति पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हामीले कमाइसँगै सामाजिक काममा पनि खर्च गर्नुपर्छ । म पहिला पैसा कमाउनतिर मात्रै केन्द्रित हुन्थेँ, अहिले सोसियो–कमर्सियल काममा लागिरहेको छु । अब मैले गर्ने व्यवसायले समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिनुपर्छ ।
० विनोद चौधरी
अध्यक्ष, चौधरी ग्रुप
अधिकांश समय म नेपालबाहिर हुन्छु । लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौं आउँछु । लक्ष्मीको उपासक भएकाले लक्ष्मीपूजामा सहभागी हुन्छु । म कर्ममा विश्वास गर्छु । तर, मेरा मार्गनिर्देशक लक्ष्मी र सरस्वती हुन् । कर्म र मिहिनेतसाथ लक्ष्मीको उपासना गरेमा अवश्य सफलता मिल्छ ।
हाम्रो सानेपा मुख्य अफिसमा भव्य रूपमा लक्ष्मीपूजा हुन्छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीको उपस्थिति रहन्छ । हाम्रो घर र अफिसमा बाउबाजेको पालादेखि नै लक्ष्मीपूजा गरिँदै आएको छ । लक्ष्मीपूजाका दिन परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँ जमघट हुन्छौँ ।
धनले आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रभावकारी प्रयोग हुनुपर्छ, अनि मात्र धनको सार्थकता रहन्छ । धन एउटा टुल मात्र हो, जति प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै बढ्दै जान्छ । पैसाको प्रयोग गर्न नजान्नेका लागि अंक मात्र होला । तर, मेरो लागि पैसा इन्धन हो । जसरी इन्धनविना कुनै पनि इन्जिन चल्दैन, त्यसैगरी पैसा नभई व्यवसाय फैलाउन सकिन्न । लगानी नगरी रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन ।
धनलाई हामीले हाँक्न सक्नुपर्छ, धनले हामीलाई होइन । जब कसैलाई धनले हाँक्न थाल्छ, उसमा विकृति सवार हुन थाल्छ, र पतन हुन्छ । म विश्वभरका मानिसको हातहातमा वाइवाइ चाउचाउ देख्न चाहन्छु । जहाँसम्म लाग्छ, म पैसाको प्रभावकारी प्रयोग गरिरहेको छु ।
० पशुपति मुरारका
प्रबन्ध निर्देशक, मुरारका अर्गनाइजेसन
दीपावलीमा पूरै परिवार काठमाडौंमा जमघट हुन्छौँ । घर र अफिसमा लक्ष्मीपूजा गर्छौं । पहिला दीपावलीकै दिनबाट नयाँ खाता सुरु हुन्थ्यो । तर, सरकारले साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था ग-यो । अहिले पनि सिम्बोलका रूपमा दीपावलीमा नयाँ खाता राख्छौँ ।
लक्ष्मी धनसँग जोडिएकी छिन् । हामी वैश्य प-यौँ, धन कमाउने समुदाय । हाम्रो नसामै पैसा बगिरहेको हुन्छ । यसैले लक्ष्मीपूजा विशेष हुने गर्छ । लक्ष्मीको आराधना गरेपछि धनप्राप्ति हुने मान्यता छ । आत्मविश्वास बढाइदिन्छ । मिहिनेत पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । व्यापार गर्दा रिस्क मोल्नुपर्छ । मैले गरेका कतिपय व्यवसायमा ठूलो घाटा पनि लागेको छ । हामीसँग जोखिम बहन गर्ने आँट छ, त्यसैले व्यवसायमा लागेका हौँ । जोखिम मोल्ने आँट नभएका व्यक्ति फिक्स्ड आम्दानीतर्फ लाग्छन् ।
जीवन चलाउन पैसा चाहिन्छ । पैसाको ठूलो महत्व छ । तर, पैसा सबैथोक भने होइन । एउटा बिन्दुसम्म पुगेपछि धनदौलतको परिभाषा पनि फेरिन्छ । मैले लिमिट क्रस गरेँ वा गरिनँ, थाहा छैन । तर, मैले जिन्दगीभर खान–लगाउन पुग्ने पैसा कमाइसकेको छु । यसो भन्दैमा व्यवसाय बन्द गरेर बस्न भएन । मसँग हजारौँ परिवार जोडिएका छन् । मैले काम गर्न छाड्नेबित्तिकै धेरै परिवारको बिचल्ली हुन्छ ।
पैसाले कसैलाई पनि पुग्दैन । र, पुग्नु पनि हुँदैन । पुग्यो भने संसारको गति रोकिन्छ । नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्दै जाँदा नयाँ मान्छे जोडिन्छन् । यदि हामीले काम गरेनौँ भने कमाएको धनदौलत सकिन धेरै समय लाग्दैन । छोराछोरी बिग्रिन्छन् । हामीले काम गरेको देखेनन् भने पैसा उडाउन थाल्छन् । अनि पतन सुरु हुन्छ ।
प्रबन्ध निर्देशक, गोल्छा अर्गनाइजेसन
मान्छेको न्यूनतम आवश्यकतासम्म पैसा सुख र दुःखसँग जोडिन सक्छ । तर, एउटा बिन्दु नाघेपछि सन्तोषको कुरा हुन्छ । कलाकारले राम्रो आर्ट बनाउँछ, उसलाई सन्तोष मिल्छ । फिल्म निर्माताले राम्रो फिल्म बनाउँदा सन्तुष्ट हुन्छ । मलाई व्यावसाय पनि आर्टझैँ लाग्छ । व्यवसाय राम्रो हुँदा सन्तोष हुन्छ । एउटा गीत चर्चित भएपछि उसलाई झन् बढी गीत लेख्न मन लाग्छ । व्यवसायीको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।
मेरो हकमा पैसा सुख र दुःखसँग जोडिँदैन । त्यो लिमिट पार गरिसकेको छु । मैले राम्ररी बिजनेस गर्न सकेँ, आफ्नो ब्रान्डलाई उचाइमा पु¥याउन सकेँ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेँ, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकेँ, सामाजिक कार्यमा योगदान गर्न सकेँ भने बढी सन्तोष मिल्छ । अब मैले यतै जोड दिने हो । मलाई पहिलो करोड कमाउँदा धेरै खुसी लाग्यो । त्यतिवेला विश्वकै बुद्धिमान् व्यक्ति हुँ जस्तो पनि लाग्यो । कुनै वेला नोक्सानी हुँदा धेरै मूर्ख रहेछुझैँ पनि लाग्यो ।
दीपावलीमा हाम्रो बिजनेस युनिटमा बिहान पूजा गरिन्छ । साँझ घरमा दीप प्रज्ज्वलन हुन्छ । हाम्रोमा भव्य पूजा गरिँदैन । किनकि, हाम्रो परिवारमा जैन परम्परा मानिन्छ । मलाई अध्यात्ममा धेरै विश्वास छ । मलाई लाग्छ, धर्म अध्यात्मको एउटा सानो अंश मात्र हो । मुख्य अध्यात्म नै हो । म नास्तिक त होइन, तर मन्दिर धाएरै पूजापाठचाहिँ गर्दिनँ । लक्ष्मीको आराधना गरेरै मात्र धनप्राप्ति हुनेमा विश्वास लाग्दैन । मिहिनेत गरेर धन कमाउने हो । पूजापाठ गर्दा मनमा सन्तोष हुन्छ ।
० चन्द्र ढकाल
अध्यक्ष, आइएमई ग्रुप
व्यवसायमा सफल हुन लक्ष्मीको आराधना र मिहिनेत दुवै आवश्यक पर्छ । वर्षको एकपटक लक्ष्मीपूजा गरेर मात्र सफल भइँदैन । मलाई लगाव र मिहिनेतले व्यवसायमा सफलता मिलेको हो । म मिहिनेतमा बढी खुसी भेट्छु । मैले सुरु गरेका बिजनेस युनिटले सफलता हासिल गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ ।
मलाई नयाँ–नयाँ काममा रमाउन मन पर्छ । यसो गर्दा नै बिजनेस विस्तार हुँदै जाने हो । मेरो दौडधुप पैसा कमाउन मात्र होइन, नयाँ काम गर्न पनि हो । मभित्र नयाँ काम गर्ने इच्छाशक्ति छ । बिजनेस गरेपछि स्वतः रिटर्न पाइन्छ । नयाँ काम सुरु गर्ने र मिहिनेत गर्ने मेरो बानी छ ।
मैले बिजनेस गर्दा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । सरकारलाई राजस्वमा राम्रै योगदान हुन्छ । कतिपय विकास नभएका ठाउँको कायापलट हुन्छ । चन्द्रागिरी केबलकार देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । आइएमई रेमिट्यान्सले विदेशमा कमाएको पैसा सहज रूपमा घर–घरमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । यो ठूलो खुसी हो ।
कुनै काम सुरु गर्दा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो आममानिसलाई हुने फाइदा हेर्नुपर्छ । दोस्रोमा सरकारलाई योगदान हुन्छ कि हुँदैन । र, तेस्रोमा आफूलाई कति रिटर्न आउँछ । त्यसो गर्दा त्यो व्यवसायले स्वतः राम्रो रिटर्न दिन्छ ।
० मीनबहादुर गुरुङ
सञ्चालक, भाटभटेनी स्टोर
लक्ष्मीको आराधना एक दिन गरेर हुँदैन । वर्षभरि नै गरिरहनुपर्छ । मान्छेले इमानदार, लगनशील र मिहिनेतसाथ काम गरेमा लक्ष्मी (धन) प्राप्त हुन्छ । यसका लागि धैर्य आवश्यक छ । हामी यति गर्न सकेमा लक्ष्मी दाहिना भइहाल्छिन् ।
मैले ३५ हजारमा सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले अर्बौं लगानी छ । देशभर १५ आउटलेट छन् । त्यो पनि साढे तीन दशकको अवधिमा । यो सबै दौडधुप धन कमाउन मात्र गरेको होइन । छोराछोरी आफ्नो खट्टामा उभिने भइसकेका छन् । श्रीमती र मलाई चाहिने पैसा कमाइसकेको छु । मैले देश र जनताका लागि आउटलेट विस्तार गरिरहेको छु । मैले एउटा स्टोर खोल्दा अढाई÷तीन सयजनाले सीधै रोजगारी पाउँछन् । साथै, मान्छेले आधुनिक किनमेलको अनुभव लिन पाइरहेका छन् ।
मेरो दौडधुपले मलाई इज्जत दिइरहेको छ । मेरो श्रीमतीले सानो स्टोरबाट सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले १०औँ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । दैनिक लाखौँले सेवा लिइरहेका छन् । मलाई आधुनिक किनेमलको ट्रेन्डसेटर भनेर सम्मान गरिरहेका छन् । खोटाङको एउटा सामान्य किसानको छोरोलाई देशले चिनेको छ । योभन्दा ठूलो खुसी मलाई अरू के हुन सक्छ !
० इच्छाराज तामाङ, अध्यक्ष, सिभिल ग्रुप
हाम्रोमा दीपावली परम्परादेखि चल्दै आएको छ । हामी पनि लक्ष्मीको आराधाना गर्छौं । यसो गर्दा व्यापार व्यवसाय फस्टाउने कथन छ । तर, लक्ष्मीपूजा धुमधाम गर्दैनौँ । पण्डित बोलाएर पूजा गर्छौं, साँझमा दीप प्रज्ज्वलन गरिन्छ ।
लक्ष्मीपूजा गर्ने वर्षभरि लक्ष्मी दाहिना होऊन् भनेर हो । हामीले हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ । राज्यलाई कर तिरिरहेका छौँ । पैसा सबैथोक होइन । आफूले गरेको काम सफल हुनुप-यो । समाजलाई योगदान दिनुप¥यो । यसले सन्तुष्टि दिलाउँछ । लगानी गरेर सिर्जना गरेको व्यवसाय राम्रो भएर समाज र राज्यलाई योगदान दिँदा बल्ल सन्तुष्टि मिल्ने हो ।
#लक्ष्मीपूजा #विनोद चौधरी
सगरमाथाको त्यो यात्रा
टुबोर्ग ओपन फेस्टमा झुमे दर्शक